ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: မင်္ဂလာပွဲသုံးပွဲ၏နောက်ကွယ်
ချာလီဆုန်က အာဂသမီးသုံးယောက်ကို မွေးခဲ့နိုင်တာပဲ...
တော်တော်လေး ထူးဆန်းတယ် ပြောရမယ်နော်...
ဒါလဲ သမိုင်း ဗဟုသုတတစ်ခုပေါ့...
မျှဝေပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ...
တကယ့် ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ ညီအစ်မ သုံးယောက်ပါပဲ..။
ဒါဆိုရင် မေလင်းနဲ့ ကျင်လင်းကထိပ်တိုက် မတွေ့နေဘူးလား . . ကျင်လင်းကဆွန်ယက်ဆင်ရဲ့ ကူမင်တန် ၀ါဒကို တိုက်ဖျက်သူ . . မေလင်းက ကူမင်တန် ချန်ကေရှိတ်ရဲ့ နားမျက်စိ . . .
ငါတော့ စိတ်ဝင်စားခဲ့တာ အမှန်ပဲဟေ့
ထက်တဲ့ မိန်းခလေးတွေက မက်မိရင် ဘာမှ မသိကြတော့ဘူး။ မက်ချင်ရာ မက်ကြတော့တာပါဘဲ။း))
နည်းနည်းထပ်ဖြည့်ရေးလိုက်ရင် ပိုကောင်းတယ်.. ဆိုလိုချက်ကို ပိုပြီးပီပြင်ထင်ရှားစေတာပေါ့....
ညီအစ်မသုံးယောက်ရဲ့ အကြောင်းက အံ့သြဖို့တောင်ကောင်းတယ်။
ဒီပိုစ့်လေး တင်ပေးတဲ့အတွက် ရေးသူကိုရော မောင်မျိုးကိုပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
၀ိုး ဆရာမျိုးရေ တကယ့်ကို ရှားပါးပိုစ့်ပဲဗျိူး
I've read about them abit.I'm interested in their biographies but more about their mother.I wonder what kind of mom she was.If you have chance,Share me more pls.Thanks for rare post.
BTW Thadingyut is near and......how's your ...?....:)))
ကောင်းလိုက်တဲ့ လေ့လာမှု...အားမှကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အာဇာနည်မသုံးယောက်ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲကို ရှာဖတ်ဦးမယ်...
ဖတ်ခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးပါ ကိုမျိုးရေ...
သြော် ဒါနဲ့ ကိုမျိုးအမေ နေကောင်းသွားပြီလား fb မှာတွေ့လိုက်လို့ ... အမေအပြန်ဆုံး ကျန်းမာပါစေလို့ ဆန္ဒပြုဆုတောင်းရင်း...
သတိုးသမီးတစ်ယောက်စီက တိုင်းပြည်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီကို ကိုယ်စားပြုထားတယ်နော်..။ ဒေါက်တာဆွန်ယက်ဆင်ကတော့ နှစ်သက်လေးစားရသူထဲက တစ်ယောက်ပါဘဲ။ စိတ်ဝင်စားစရာလေးမို့ စာရေးသူကို ဒါမျိုးလေးတွေ ထပ်မံရေးခိုင်းပါဦး...။
ညီမ ၃-ယောက်မို့ ပဲနော်
၄-ယောက်ဆိုရင်တော့ ဘာမက်ဦးမလဲ မသိဘူး။
ဒါပေမယ့် ကိုယ်လိုခြင်တာ ရဘို့အတွက် အိမ်ထောင်သည်တွေနှင့် ငြိစွန်းတာတော့ မကြိုက်ဘူး။ ပူတင် နောက်မိန်းမ ယူတာလဲ မကြိုက်ဘူး။ ပထမ မိန်းမတွေ အကြောင်းတော့ မသိပါဘူး။
ဗဟုသုတလဲရတယ်။ ဖတ်လို့လဲကောင်းတယ် အစ်ကိုမောင်မျိုးရေ။ ကျေးဇူးပါဗျာ။